BARAKAY | mandimby maharo
Posted on 14 December 2012 by Mandimby Maharo
Nanapa-kevitra ny tsy hilatsaka ho fidina amin’ireo fifidianana isan’ambaratongany Ravalomanana. Io no fanambarana lehibe nataony ny Talata 11 desalbra teo tany Tanzania, rehefa avy nihaino ny tolo-kevitry ny toko telo ao amin’ny Sadc izy. Ho tambin’io fanoloran-tena kosa dia miangavy ny fiarovan’ny Sadc izy amin’ny fiverenany eto an-tanindrazana.
Toa nilatsaham-baratra ireo mpikambana ao amin’ny ankolafy Ravalomanana nahare izany fanambarana izany. Ireo izay tsy nitsahatra namerimberina fa tsy maintsy ho filoha indray Ravalomanana. Kabary izay nataony tsy noho ny faharesen-dahatra nefa fa hita ihany fa noho ny kajy politika. Hatrizay manko dia hita fa natao fialokalofana sy apinga niarovan-tena ary natao lefona nahazoana seza ny anaran-dRavalo. Ireo izay tsy manana lanja politika akory raha handeha hisedra fifidianana dia niditra ho isan’ny mpanohana azy ka lasa nahazo toerana tao amin’ny andrimpanjakan’ny tetezamita.. Tao ireo izay tsy hita popoka nandritra ireny ady mamaivay ny taona 2009 ireny, fa nanao taridositra no nipoitra ka nivazavaza teny an-kianja fa izy ny tena zanak’i dada. Tsy vitsy amin’izy ireo koa no efa maka rirandrirany any amin’ny Fat satria te hirotsaka ho fidina amin’ny heritaona. Misy mihitsy moa no efa manomana izany fifidianana izany. Tsy manana fahatokina ny ho lany amin’ny alalan’ny ankolafy Ravalomanana nefa izy ireo satria izy ireo mihintsy no malailay fonosana amin’ny ho fiverenan’ity filoha ity eo amin’ny fitondrana. Misy manko ireo izay mahana noho ny zavatra izay natao tany ambadika tany nandritra izay fotoana maro tsy naha teo azy izay: ao ireo manao tantely afa-drakotra ny fananan’ity filoha teo aloha ity., ao koa ireo mpanao tatitra vilana mitango vola any aminy any isaky ny misy zavatra miseho eto.
Mizarazara kosa ny hevitry ny ololtsotra mpomba ity filoha teo aloha ity. Ao ireo malahelo satria toa very maina ny nitolomana nandritry ny 3 taona mahery. Toa mahatsapa ho foafitaka ihany. Maro koa nefa ireo mankasitraka izao fanampahakevitra izao satria nahatsapa fa izay fanetre-tena izay no tena fitiavana ny tanindrazana. Amin’izy ireo dia tsy ny filatsahany ho fidina no maika fa ny fiverenany eto Madagasikara.
Tapitra hatreo noho izany ny fahafahan’ireo mpanao politika mpialokaloka amin’ny anaran-dray ireo mampiasa izany anarana izany; tsy maintsy hiady irery amin’izay. Barakay koa ny fiaraha mitantana satria tsy misy lanja intsony ilay ankolafy, na dia hita sy tsapa fa matanjaka aza Ravalomanana eo amin’ny sehatra politika. Fahatanjahana izay tsy maintsy araraotiny ihany dIeny mbola tsy manana drafitra milamina ny mpifanandrina aminy. Ny Fat izay sanganehana noho ny vava be natao ka tsy ho azo raofina intsony ny amin’ny tsy hilatsahana ho fidina. Voasongona teny ampandehanana nefa satria ela filalao loatra noho ny fiandrasana ireo “zava-bita” ho tokanana. Voatery tsy maintsy hanenjika izany indray ankegitriny ka midodododo any Tanzania koa na dia efa niavo tsy feno tamin’ilay fanasana nataon’ireo mpahandro aza.
Tags: Rajoelina, RavalomananaCategories: Uncategorized
3 thoughts on “BARAKAY”
Pingback: FAT, miomana hivadika Davida | mandimby maharo
Pingback: mandimby maharo
Pingback: Politika: Vonona ny handray vehivavy ho filoha ve ny malagasy? | mandimby maharo